Putin iyo Trump oo Sabtida khadka taleefoonka ku wadahadli doona - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldPutin iyo Trump oo Sabtida khadka taleefoonka ku wadahadli doona
January 27, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Putin iyo Trump oo Sabtida khadka taleefoonka ku wadahadli doona. [Sawirka: Puntland Mirror Graphic]
Moscow-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa beri oo Sabti ah wadahadal khadka taleefoonka kula yeelan doona madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, sida ay sheegtay madaxtooyada Kremlinka ee Ruushka maanta oo Jimce ah.
Sida ay ku warantay wakaalada wararka Ruushka ee TASS, afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa cadeeyay in la qorsheeyay wadahadalka taleefoonka ku dhexmari doona labada hoggaamiye.
Putin ayaa horey bayaan ugu sheegay in Ruushku uu ku go’aan kaari doono sida maamulka Trump uu u wajaho xiriirka siyaasadeed ee u dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka.
Intii uu ku guda jirey ololihiisa ilaa iyo doorashadiisa, Trump ayaa sheegay ujeedada xiisaha xiriirka wanaagsan ee Ruushka waxaana uu kusoo celceliyay ammaanta hoggaamiye Putin.